China BV-DBB-02F mpanamboatra sy mpamatsy | DEYE
Andiany No. BV-DBB-2F
China DBB ball Valve Manufacturer DEYE Manome 300LBS vy tsy misy fangarony indroa sy valiny valizy miverina miaraka amin'ny tendrony Flanged, 3 Inch, Flanged RF Ends, Lever Operated.
Valizy baolina 300LBS
Valibola baolina DBB
Valizy indroa sy valizy baolina mandeha ra
Valaka baolina mifarana flanged
Valve vy tsy misy vy
Fenitra famolavolana: API6D
Vatana ara-batana: Stainless Steel SS316 SS304
Savaivony nominal: 4 ″ -24 ″
Fifandraisana farany: Flange RF RFXNPT
Tombo-kase: PTFE, RPTFE, NYLON, DEVLON, PEEK
Fomba fiasa: Lever miasa
ny Valibola baolina DBBdia valizy manidy roa, manidy indroa ary vonjy taitra. Valizy fanakatonana avo roa heny sy famoahana indroa ary fanampiana, mety amin'ny solika fiaramanidina, menaka maivana, entona voajanahary, gazy liquefied, gazy fantsom-pitaterana, mpanelanelana simika ary fantsona hafa, ho fitaovana tsara hanapahana ilay fitaovana.
Ny lakilen'ny fiasa miasa amin'ny valizy roa-mikatona sy valiny mandeha ra dia ny fihetsik'ireo sary mihetsika roa napetaka tamin'ny akoho.
Ny valva dia manana fitaovana fanamaivanana mandeha ho azy (tsy voatery). Rehefa voahidy tanteraka ny valizy dia manakana ny efitrano valizy tsy hitombo tsindry matetika ary hanamarina ny vokatry ny valva. Ny tondro valin'ny valizy dia ampifanarahina amin'ny toeran'ny switch, izay afaka mampiseho tsara ny toeran'ny valizy.
Teo aloha: BV-40-BW03
Manaraka: Atsipazo Valve vy GVC-001500-F
Tombo-kase azo atao: PTFE, RPTEF, NYLON, DEVLON, PEEK, Metal Seated
Haben'ny habe: 2 ″ -16 ″ DN50-DN400mm
Ny valizy baolina DBB dia valizy mihidy indroa, manidy indroa ary vonjy taitra. Valizy fanakatonana avo roa heny sy famoahana indroa ary fanampiana, mety amin'ny solika fiaramanidina, menaka maivana, entona voajanahary, gazy liquefied, gazy fantsom-pitaterana, mpanelanelana simika ary fantsona hafa, ho fitaovana tsara hanapahana ilay fitaovana.
Izy io dia mety amin'ny solika fiaramanidina, menaka bai light, gazy voajanahary, gazy liquefied, gazy fantson-tsolika, haino aman-jery simika ary fantsona hafa, ho fitaovana mety tsara hanapahana ilay fitaovana.
600LBS 4A DSS Trunnion mitaingina valizy (BV-6 ...